Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Njem gawa n'ihu n'ụbọchị mbụ: ọgụgụ isi mmadụ dị adị
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Njem gawa n'ihu n'ụbọchị mbụ: ọgụgụ isi mmadụ dị adị.
AI na-arụ ọrụ naanị mgbe data, na ikpo okwu na-akwado ya, dabara maka ebumnuche iji AI iji wuo ahụmịhe kachasị mma maka ndị njem.
Ụbọchị mmeghe nke njem n'ihu malitere site na nnọkọ a raara nye AI na njem.
Ngwá ọrụ dị maka ịhazi oke mmadụ - mana ọ dị mkpa ka ọ gbanwee echiche uche. Nkewa abụghị nkeonwe.
Ọ bụrụ na ị na-ekerịta data, algọridim nwere ike ịrụ ọrụ n'ofe isi mmalite, nhazi onwe ya nwere ike ịghọ ọnụ, mmekọrịta.
Ndị isi ọrụ teknụzụ sitere na ụlọ ọrụ njem niile kwenyere na ọgụgụ isi (AI) ga-arụ ọrụ dị mkpa na-akwọ ụgbọala mgbake nke njem ogologo oge ka uche na-esetịpụ na àgwà kwupụta mgbanwe nkekọrịta data.
Ụbọchị mmeghe nke njem n'ihu malitere site na nnọkọ raara onwe ya nye AI na njem.
Andy Owen-Jones, CEO na onye na-arụkọ ọrụ nke AI-early-adopter bd4travel, kwuru na AI na mmụta igwe bụ nanị ụzọ ụlọ ọrụ njem si "ịnye" ihe ndị njem ha chọrọ.
Agbanyeghị, ịgafe “nkezi” wee banye “nhazi onwe onye”, AI ndị ọkachamara chọrọ ịnweta data
“Ngwaọrụ ndị ahụ dị maka ịhazi oke mmadụ - mana echiche kwesịrị ịgbanwe. Nkewa abụghị nkeonwe."
Sundar Narasimhan sitere na Saber Labs kwuru na a na-egosipụta ọdịiche a na otu ụlọ ọrụ si eji ngwa AI na mmụta igwe na njem ugbu a bụ injinia ma kwalitekwa ya iji kwalite ahụmịhe maka ndị njem yana pụọ ​​na ịkwalite mkpụrụ maka ndị na-ebubata ya.
Ọ kwadoro echiche ọhụrụ n'ihe gbasara nkesa data.
"Ọ bụrụ na ị na-ekerịta data, algọridim nwere ike ịrụ ọrụ n'ofe isi mmalite, nhazi onwe onye nwere ike ịghọ mmekorita, mmekorita." Ọ kọwapụtara ihe eji eme ihe n'ọdịnihu ebe AI nwere ike ịnye ahụmịhe njem ebe ụgbọ elu na ebe obibi ahaziela.
Echiche, echiche ọhụrụ na echiche ọhụrụ bụkwa isiokwu n'ime oge ndị ọzọ. Jospeh Ling si Vouch kọwara ka azụmahịa ya si agbanwe echiche na ụlọ ọrụ nkwari akụ.
"Anyị kwesịrị ime ka ndị na-azụ ahịa kwenye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya abụghị otu n'akụkụ niile. Ngwaahịa anyị na-enyere ndị na-anya ụlọ ọrụ aka ịmegharị ọtụtụ ọrụ ebe mmadụ anaghị emetụ aka, nke na-ahapụ ndị ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ha lekwasị anya na ọrụ ndị na-emetụta ahụmahụ ndị ọbịa n'ụzọ anụ ahụ, "ka o kwuru.
Ụlọ ọrụ ọzọ ebe uche chọrọ mgbanwe bụ ụgbọ elu. Mkparịta ụka panel n'ehihie enweghị mgbagha n'echiche ya na imeziwanye nkekọrịta data n'etiti ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị na-arụ ọrụ ọdụ ụgbọ elu na njikwa ụgbọ elu nwere ike ime ka ụgbọ elu na ụgbọ elu dị mma, na-erite uru ozugbo nke obere ihe ọkụkụ site na mbelata ọkụ ọkụ.
Yann Cabaret si SITA gwara ọnụ ụlọ ahụ juru n'ọnụ na "teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-akwado mmekorita - site na data anyị nwere anyị nwere ike itinye mmụta igwe iji kwalite mmegharị ụgbọ elu, na mbara igwe ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu."
Otú ọ dị, echiche azụmahịa na-egbochi ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ nkeonwe na-ekerịta data na ibe ha, ọnọdụ na-adabaghị na ịlụso ihe mberede ihu igwe ọgụ. "Mgbalị ụlọ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ," ka o kwuru.
Ọnụ ọgụgụ nke data ahaziri ahazi na nke a na-ahazighị n'ime ụlọ ọrụ njem na-emepụta ebe dị mma maka ọgụgụ isi na-emepụta ihe ọhụrụ, ahụmahụ dị mma maka ndị njem na ego ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ njem. Otú ọ dị, ihe si na nke a pụta bụ na ọnụ ọgụgụ data pụtara na ụlọ ọrụ kwesịrị iche echiche banyere ịkwado data ahụ tupu iji ya.
Akwụkwọ ntuziaka Hilty sitere na ọkachamara na-eme atụmatụ njem njem ọtụtụ ụbọchị Nezasa kwuru na azụmahịa ya na-etolite ikpo okwu ya ka o wee nwee ike ịkwado nyocha data na AI n'ogo wee tinye nghọta na ọkwa nkeonwe.
"Ịme atụmatụ, ntinye akwụkwọ na imezu njem nlegharị anya ọtụtụ ụbọchị nwere ọtụtụ, ọtụtụ ihe mmetụ nke nke ọ bụla n'ime ya dị mgbagwoju anya," ka o kwuru. "Anyị maara na AI na-arụ ọrụ naanị mgbe data, na ikpo okwu na-akwado ya, dabara maka nzube nke iji AI iji wuo ahụmahụ ka mma maka ndị njem".